Askari katirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAskari katirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo
Ciidamada Amniga Puntland. [Photo: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Askari katirsan ciidamada Puntland ayaa xalay oo Jimce ahayd fiidkii niman hubaysan oo aan haybtooda la aqoon ku dileen gudaha magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dadka deegaanka ah iyo amniga.
Sida ay sheegeen ilo-wareedyadu, nimanka aan haybtooda la aqoon oo ku hubaysnaa baastoolado ayaa askariga ku dilay kasoo horjeedka huteel kuyaala Gaalkacyo.
Nimanka hubaysan ayaa sidoo kale dhaawacay qof shacab ah kaas oo la fadhiyay askariga markii dilku dhacayay.
Dilka ayaa ku soo beegmaya saacad kadib markii Puntland ay toogasho ku fulisay shan xubnood oo katirsanaa Al-Shabaab gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso, shan kamid ah xubnaha ayaa la qabtay iyaga oo walxaha qarxa gelinayay gudaha Boosaaso. Labada kale ayaa dad ku dilay gudaha Gaalkacyo.
Sida ay sheegeen ilo-wareedyadu, askariga la dilay ayaa ka dambeeyay qabashada xubin Al-Shabaab ah oo kamid ahaa kuwii shalay oo Jimce ahayd lagu toogtay gudaha Boosaaso.
August 23, 2017 Afar qof oo ku dhimatay gobolka Bari kadib markii ay cabeen biyo sumeysan
October 30, 2017 Wasiirkii Warfaafinta ee ugu horeeyay Puntland Cawad Casharo oo ku geeriyooday dalka Canada
May 23, 2017 Ugu yaraan saddex qof oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada booliiska magaalada Garoowe ayaa digniin u diray dhalinyarada falalka amni darada ah magaalada gudaheeda ka sameeya. Kornayl Maxamuud Muuse Bile oo oo loo yaqaan Fardafuul oo shir jaraaid ku qabtay maanta [...]
Puntland and Somaliland forces clash in Sanaag region
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland and Somaliland forces fought in Hayland region on Monday, residents and officials said. The fighting between the two sides involving heavy artillery began early morning of Monday and continued until midday, according [...]
Puntland President travels to Ethiopia
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Abdiweli Mohamed Ali has traveled to Ethiopia on Monday. Speaking to reporters at Conoco temporary airfield in Garowe, President Ali said he will hold talks with the Ethiopia officials during his [...]